တာရှည်ဘ ၀ သက်တမ်းကုန်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူအတွက်လိုအပ်သောလက်ကား MBD10 မြင့်သောကြမ်းတမ်းသောအရွယ်အစားစိန်အမှုန့် | SinoDiam
SND-G60 ၏ 2. အက္ခရာ
MBD10 နှင့်ညီမျှသည်၊ အချို့သော cubooctahedral ပုံသဏ္,ာန်၊ မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုစွမ်းအားနှင့်အပူတည်ငြိမ်မှု။ ကျောက်ကြွေများ၊ ကြွေထည်မြေထည်များ၊ မျက်မှန်များနှင့်သံလိုက်ပစ္စည်းများစသည်တို့ကိုကြိတ်ခွဲရန်နှင့်အရောင်တင်ရန် electroplated tools များကဲ့သို့သောမြင့်မားသောကြိတ်နှုန်းကိုလိုအပ်သောအခြေအနေတွင်အသုံးပြုသည်။
3. ကွက်အရွယ်အစားစိန် Speicication
SND-G20, 80 / 100-325 / 400 SND-G30, 80 / 100-325 / 400
ပုံမှန်နှင့် angular crystals ရောနှော, အလတ်စား - အနိမ့်
blocky ပုံဆောင်ခဲနှင့်အတူမာကျောမှု။ ဟုတ်တယ်
စိန် tools တွေကို။
ပိုကောင်းသောစိန် shpe နှင့်အတူအလတ်စား tohness ။
beveling ဖန်၏စိန် tools တွေကိုများအတွက်သင့်လျော်သော
သို့မဟုတ် crystal, carbide နှင့်သံလိုက်၏ကြိတ်
SND-G40, 80 / 100-325 / 400 SND-G60, 80 / 100-325 / 400
အလတ်စားဝန်ပစ္စည်းများ process လုပ်ဖို့ဘီးများကဲ့သို့
မှ electroplated tools များကဲ့သို့ကြိတ်နှုန်း
နှင့်သံလိုက်ပစ္စည်းများ, etc ။
4. Fine Size ဒြပ်စိန်ရရှိနိုင်အရွယ်အစား
80/100 100/120 120/140 140/170 170/200 200/230 230/270 270/325 325/400
SND-G20 √ √ √ √ √ √ √ √ √
SND-G30 √ √ √ √ √ √ √ √ √
SND-G40 √ √ √ √ √ √ √ √ √
SND-G60 √ √ √ √ √ √ √ √ √
SND-G05 50 / 60-325 / 400
SND-G10 30 / 35-325 / 400
SND-G15 30 / 35-325 / 400
20 / 25-70 / 80
အလတ်စား - အနိမ့်ဝန်။
SND830 20 / 25-70 / 80
အနိမ့်မှအလယ်အလတ်မာကျောမှု၊ Semi-blocky ပုံသဏ္,ာန်၊
ယေဘုယျအသုံးပြုမှုအတွက်စိန်ဓါးသို့မဟုတ် girnding ဘီးအောင်သည်။
SND840 20 / 25-70 / 80
ပြည့်စုံသော cubo-octahedron ပုံသဏ္,ာန်၊
အရည်အသွေးမြင့်စိန်ဓါး, core ကို -bits, electroplate စိန် tools တွေကို
SND860 20 / 25-70 / 80
အလတ်စားမှမြင့်မားသောမာကျောမှု၊ Blocky crystal ပုံသဏ္,ာန်၊
တည်ငြိမ်မှု။ စိန် sawing tools များနှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ tools တွေကိုများအတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။
SND870 30 / 35-70 / 80
SND880 20 / 25-70 / 80
မြင့်မားသောခိုင်မာခြင်း, ဖြောင့်ကြည်လင်အနားနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောပုံသဏ္,ာန်, ကောင်းသော
SND890 20 / 25-45 / 50
MBD4 Fine Size သတ္တုဒြပ်ပေါင်းအချည်မျှင်စိန်ပွင့် ...